Ity no tara-pahazavana ataon'ny My Neighbor Totoro avy amin'ny Studio Ghibli nataon'i mpankafy | Famoronana an-tserasera
Misy ireo mpankafy izay noho ny fitiavany fatratra ny andian-tantara tiany na ireo sarimihetsika Studio Ghibli dia afaka mamokatra fifantohana ampy hahatonga ny Internet ho tia. Izany no nitranga tamin'izay niaraka Ny fiheverany ny taratra Blu-ray dia nahatonga antsika rehetra ho faly.
Izany dia miaraka amin'ny horonantsary My Neighbor Totoro izay nilalaovany ny tsara indrindra amin'ireo fomba hamoronana iray amin'ireo boaty voalohany indrindra izay mbola hitantsika. Volavola iray nataon'ny mpampiasa Twitter @panasonynet ary mampiseho fa, na dia miatrika endrika tsy dia mahazatra loatra aza izahay, dia mety tsara ho an'ny fanangonana sarimihetsika Studio Ghibli izany.
Raha ny Studio Ghibli mihitsy no nizara tamintsika rehetra ny sasany fiaviana virtoaly mahafinaritra ho an'ny antso an-tsary Zoom, mpankafy ny studio Animation Japoney dia nanana ny hevitra tsara hamoronana an'ity fotokevitry ny boaty Blu-ray ity avy amin'ny iray amin'ny sarimihetsika.
- ????? (@panasonynet) Enga anie 10, 2019
Una seho avy amin'ny sarimihetsika My Neighbor Totoro izay ahitàna ireo mpifaninana roa mijery ny renirano ary milalao ny taratr'izy ireo mba hametrahana tsara ny sary eo amin'ilay boaty. Mahatalanjona ny vokatra azo ary afaka nahatonga ny Internet ho latsa-pitia tamin'ny fitiavany an'aliny tao amin'ny tambajotra sosialy Twitter.
@panasonynet no mpamorona ity boaty blu-ray ity miaraka amin'izany vokatra izany dia mety indrindra ho an'ny sarimihetsika toy ny My Neighbor Totoro ary azo antoka fa hijerena ilay Studio Ghibli. Iza no tsy te hanana boaty ka rehefa manokatra azy ireo dia miseho ny protas roa toa ny avy amin'ilay kapila manga-mitovy ihany ilay seho an'ilay sarimihetsika.
Hisy izao andraso raha mitaona azy ireo ilay hevitra ary hitantsika amin'ny ho avy ny boaty blu-ray amin'ilay sarimihetsika mitovy. Azo antoka fa hahomby amin'ny varotra izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ity hevitra Blu-ray boaty avy ao amin'ny Studio Ghibli ity dia nahatonga ny Internet ho tia